I-YouTube yethula ukubukwa kwevidiyo okungaxhunyiwe e-Afrika - Afrikhepri Fondation
Isikhathi esisetshenziswe ku-YouTube ngama-Afrika sikhula ngesivinini esikhulu, ngamanani angama-70% ngonyaka. Kodwa-ke, umuzwa womsebenzisi uhlala umbi endaweni yesikhulumi, ngenxa yekhwalithi engemihle ye-inthanethi. Abantu ngokuyisisekelo basebenzisa ukuxhumana kwe-2G kanye nesivinini sokulanda esijwayelekile esingu-50kb / isibili. Lokhu kuxilongwa kwenziwa nguHeather Thompson Rivera, inhloko yobambiswano e-YouTube.
Ukhulume ngesikhathi se-“Digital Entertainment Africa” ngesikhathi se-AfricaCom 2015, umhlangano omkhulu esizindeni sedijithali.
UHeather Thompson Rivera ucabanga ukuthi kusekuningi okumele akwenze ezwenikazi ukuvumela ukufinyelela okungcono nokusebenzisa okungcono kwe-YouTube. Umsebenzi wokungaxhunyiwe ku-inthanethi wethulwa njengesixazululo esishintshwe ezwenikazi, ikakhulukazi eningizimu yeSahara lapho, ngaphandle kokuqhuma kwe-Smartphones, inkinga ihlala ukungafinyeleleki kwemininingwane engabizi ngesivinini esikhulu.
Isici se-YouTube esingaxhunyiwe ku-inthanethi sikuvumela ukuthi ugcine amavidiyo angaxhunyiwe ku-inthanethi kuhlelo lokusebenza leselula le-YouTube. Lawa mavidiyo angabukwa ngokuxhunyaniswa okuncane noma kungabikho phakathi kwamahora angama-48. Isimo ukuthi ukusebenza okungaxhunyiwe ku-inthanethi kuyatholakala kuvidiyo okukhulunywa ngayo, ngoba amavidiyo omculo awathintekile. Bese uchofoza isithonjana esingaxhunyiwe ku-inthanethi, ividiyo ingabukwa kamuva.
Ngesici se-YouTube esingaxhunyiwe ku-inthanethi, kungenzeka ukusindisa ama-movie, amahlaya asendaweni noma amavidiyo angenamabhokisi. Amazwe amathathu ase-Afrika asevele ezuza: iNigeria, Kenya neGhana.
Imfihlo Strangest - Earl Nightingale (Audio)
Ukungethembeki Okunganqunyelwe - Pema Chödrön (Umsindo)